Ny fomba fiasan’ny fanivanan’ny ICANN TLD afenina any anatin’ireo antsipirihan’ny toro-lalàna ho an’ny mpirotsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2010 14:32 GMT
Ao anatin'ireo antontan-taratasy miavosa miresaka ny politika & ny lalàna, dia mety hila fitrandrahana kely ny fitadiavana ireo tena resaka marina ao anatin'izany. Tsy misy hafa loatra amin'io fomba fijery ny Dika Faran'ny boky toro-làlana ho an'ny Mpirotsaka nataon'ny ICANN's gTLD ary maro amin'ireo teboka tena manan-danja no afenina any anatin'ireo antsipirian-javatra any.
Noho io antony io rehefa te-hitsikera mikasika ny Toro-làlana vaovao ho an'ny Mpirotsaka ny Fikambanana manohana ny Fahalalàhana miteny & Fahalalàhan'ny media ao amin'ny sehatra fiadian-kevitry ny Fitantànana ny Aterineto, ny vokany dia nifaly izahay fa efa nivonona hihoatra ny pejy 300 mahery amin'ilay antontan-taratasy i Milton Mueller avy ao amin'ny Syracuse & sy ny Anjerimanontolon'i Delft izay na ny ICANN aza dia toa nihevitra fa lava loatra ny mamaky izany indray mandeha ka nozarazarainy ho fizarana dimy.
Vokatr'izay dia tsy tokony hahatalanjona fa ny fanambarana izay navoakan'ny Fikambanana FoE Dynamic natolony ny ICANN tamin'ny Zoma dia mifototra amin'ny 3.4.3., andininy fohy amin'ny Fizarana 3 (Ireo dingana) izay mety hisy vokany lehibe ihany eo amin'ny lafin'ny fahalalàhana miteny eo amin'ny sehatra maneran-tany. Ny zavatra mbola mampiahiahy dia ny Fikambanana FoE Dynamic irery ihany no tena nanao tsikera mikasika ity ampahany amin'ny dingana ity (Fizarana faha 3) ao amin'ny Toro-làlana ho an'ny Mpirotsaka , dia lasa tsy mahagaga avy amin'ireo lisitry ny ICANN mikasika ireo tsikera ao amin'ity ampahany ity:
Mahatonga hifantoka amin'ireo famaritana & mekanisma lehibe ao anatin'ity ampahan-drafitra ity, izay mety hamela ny tsikeran'ny TLD ho tsy fantatra, mifototra amin'ireo hevitra tahaka ny hoe ‘tombon-tsoan'ny vahoaka’ izay ratsy famaritana eran-tany sy manokana ny rafitra manontolo ho amina “mpanome tolotra famahàna fifandirana” misaraka.
Ho an'ireo izay mbola tsy resy lahatra fa mety hanana fiatraikany ratsy lehibe amin'ny fahalalahana miteny ireo rafi-dalàna ireo, ny fanisihana ny “fahaiza-miaina sy ny filaminam-bahoaka” ao anatin'ity antontan-taratasy ity dia ampy hifehy ny tsikera tahaka ireny. Koa satria tsy misy ireo lasitra fahaiza-miaina sy filaminam-bahoaka ekena eran-tany, ny fiteny ‘fepetra ankapoben'ny lalàna iraisam-pirenena’ no toa mifandray kokoa aminy.
Ireo teboka voatanisa eto dia famintinana fohifohy mikasika ny fanambarana manontolo, izay hita ao amin'ny :
Amin'ny maha mpikambana anay ao amin'ity Fikambanana FoE Dynamic ity, mangataka ny ICANN izahay mba handray ny andraikiny mikasika ireo tsikera ireo ary hanova ny ampahany misy amin'ireo dingana voavinavina. Na dia toa ara-drafitra fotsiny aza ny fahitàna ireo tsikera, dia tena lehibe mihitsy ny fiantraikany ary miantraika mivantana any amin'ny fahalalahana miteny voakasika ao amin'ity toro-làlana ho an'ny Mpirotsaka ity.
Arakaraky ny vesatr'ireo antontan-taratasy mianjady amin'ny fizotry ny politika no lanjan'ny fanadihadihana ny antsipiriany mikasika ireo dingana ireo sy ireo mekanisma miafina ao anatiny. Amin'ity raharaha ity, tahaka ireo raharaha manan-danja maro hafa, dia mety ho miafina anelanelan'ireo takela-taratasy sy ny lahatsoratra ao amin'ny pejy 136n'ny 305, na ao anatin'ny Ampahany 3.4.3.